Muchidzidzo ichi chakanzi Substantive, isu tinokupa iwe ruzivo nezve mazita echiGerman, anoti mazwi echiGerman. Isu tinopa ruzivo nezve mazita echiGerman, ndiko kuti, mazita ezvinhu, mazwi, zvinhu.
Shamwari, isu tinotarisa pamabatiro iwe aunoda kuziva uye neruzivo iwe rwaunoda kuti ubate mumusoro wenyaya misoro yatinoparidzira kuti tidzidze chiGerman. Nekudaro, isu tinofanirwa kusanganisira akakosha magirama nyaya aunofanirwa kuziva iwe uchidzidza chiGerman. Chinyorwa chatichafukidza mune ino kosi chichava Mazita eGerman (Substantive). Kuti nyaya iyi inzwisiswe zvirinani, tinogona kutanga chidzidzo chedu nekusimbisa kuti chinofanira kunyatsonzwisiswa muzvinyorwa zveGerman zvatakaburitsa kare.
Kutsanangura zita muchidimbu, inonzi mazwi atinopa kune zvisikwa. Semumutauro wedu pachedu, pane mhando senge imwechete, yakawanda, yakapusa, yakasanganiswa, isingabvumirwe, kongiri mumazita echiGerman. Zvekare, semutauro wedu, kune mamwewo marudzi senge conjugated-e mamiriro ezita. Zvinonzi pane angangoita mazana maviri nemakumi mashanu emazwi muchiGerman, uye ese mavambo emazita ese akanyorwa nemusoro, zvisinei nemazita chaiwo. Uye kuzviisa muchidimbu, vanotora mazwi (der, das, die), anozivikanwa sezvinyorwa, pamazita ezita rega rega.
Izvo zvinokwanisika kuongorora mazita mumutauro wechiGerman nekuakamura kuva matatu genera. Izvi;
Bonde reMurume (Mazita echirume)
Mukadzi Genus (Mazita echikadzi)
Kwakarerekera Kubereka (Mazita Asina Gender) vakaparadzaniswa se.
Maererano nemitemo yegirama yakashandiswa, pfungwa iyi inopihwa kumazwi echirume ane chinyorwa che "der", munhukadzi kumazwi echikadzi ane chinyorwa che "kufa", uye mazwi asina kwaakarerekera ane chinyorwa che "das".
ChiGerman Masculine Gender (Varume Mazita)
Mazita ese anopera nemavara -en, -ig, -ich, -ast anogona kunzi murume. Pamusoro pezvo, mazita emwedzi, mazuva, mafambiro, mwaka, mazita ezvese zvisikwa zvebonde, uye mazita emigodhi nemari zvakare ari echirume.
ChiGerman Mukadzi Wemadzimai (Mazita echikadzi)
Mazita anopera nemavara - e, -ung, -keit ,, -ion, - in, -ei, -heit anogona kunzi munhukadzi. Uye zvakare, iwo mazita, nhamba, ruva, rwizi, rwizi, miti nemichero mazita ezvese zvisikwa zvechikadzi zvakare vanhukadzi.
ChiGerman Neutral Kubereka (Mazita Asina Gender)
Mazita anoshandiswa zvakafanana muvose vanhukadzi, guta, nyika, vana, simbi nemazita akatorwa ese anoonekwa seasina kwazvakarerekera.
Kwete: Generalization yakaitwa pane yakataurwa nyaya. Kana usina chokwadi nezvekushandiswa kwemazwi, tinokurudzira kuti utore duramazwi reGerman sosi Nenzira iyi, iwe unozodzidza mazita matsva aunodzidza nekushandisa chaiko.